Laba besifazane bamangala ngomusa nangokwehluleka. Le ntombazane ifuna ukuvikela abaningi. Kodwa, ngakolunye uhlangothi, ukuthambekela kwemvelo nakho kungathinta impilo. Ngakho-ke, kunemibuzo yaloluhlobo: i-psychotype "u-Esenin" - indlela yokuzijabulisa ngayo?
Umbuzo we-psychotype "u-Esenin" - ukuthi ungaxhumana kanjani nesimo esithandekayo, empeleni, okokuqala, kubonakala kwabesifazane abanomlingiswa onjalo.
Ngakho-ke, yiziphi abesifazane abane-psychothepe "Esenin". Abesifazane abanesimo esithandekayo nabo babizwa ngokuthi "Isingoma". Lokhu akumangazi, ngoba isimo sabo sothando sitholakala kukho konke, ngisho nasezingutsheni nasezinhlotsheni ezizithandayo. Abesifazane "I-Yesenin" bathanda kakhulu yonke into ebomvu ne-beige, kodwa hhayi emhlophe, ne-shades, evulekile. Abalokothi bagqoke izinto ezijwayelekile, ngakho bazigoba, bahlele futhi bathenge konke abakuthengile ukuze le nto ibe yinto ehlukile futhi eyingqayizivele endleleni yayo. Ngendlela enjalo, bahlale bephupha ngento ethile futhi bakhathazeke kalula. Ngesikhathi esifanayo, amantombazane e-Esenin yengqondo adonsa injabulo, izinkampani, amaholidi kanye nokuhamba. Abahlali bodwa futhi abazigweme ukuxhumana. Ngakho-ke, ngakolunye uhlangothi, akunzima ukuxhumana nemvelo ngokunethezeka kakhulu, uma kungenjalo nge-whims, okuvame ukuphazamisa umbono mayelana ne "Lyrics".
Kodwa, ake sikhulume ngezinzuzo. I-Psychotype "Lirik" ungowesifazane ohlala ethanda futhi ethanda ukuxhumana. Uma lokhu kuyi-psychotype yakho, ngakho-ke awunakeli ngempela lokho umfana akubukeka. Awuyena fan of metrosexuals ezimnandi. Ngokwemvelo yabo uhlukile ngokuphelele. Into ethi "I-Lyrics" musa ukucabanga laba bantu ukuba babe amadoda angempela. Futhi udinga leyo nsizwa enamandla angokomoya. Empeleni, udinga indoda enjalo ngoba ufuna ukuhlala ulula futhi ungenakuzivikela. Eqinisweni, ukuzama ukuzijabulisa emphakathini, "Isingoma" sibheka ama-knights ngaphandle kokwesaba nokuhlambalazwa, okuyohlale kuwavikela futhi uwasindise kusukela ekubambeni kwamadonsoni amabi. Eqinisweni, awuyena othobekile njengoba ufuna ukuzibonakalisa wena nabanye. Kodwa, ngenxa yesifiso sokuba usana, ukukhala komunye umuntu ehlombe ngenxa yothando oludlulile, abesifazane abanjalo abafuni nje ukuveza amandla abo.
Enye ubunzima uma ufuna ukuxhumana nabantu ukuthi awukwazi ukwenza izinqumo futhi ukwesaba ukuhlolisisa isimo futhi uhlole ngempela. Yingakho akufanele wenze ibhizinisi kunoma yikuphi. Umsebenzi onjalo uzophela "I-Lyrics" ephelele ukwehluleka nokubhujiswa. Ungumuntu odala, yingakho kungcono ukhethe umkhakha womsebenzi ozoxhunyaniswa nobuciko, noma kunalokho, ngezincwadi. Kulaba besifazane abane-psychothepe "Yesenin", njengoba akumangazi, abalobi abalungile, abahleli bezincwadi kanye nezintatheli zitholakala.
Uma sikhuluma ngothando nomndeni, khona-ke ufuna ukuthi umshado wakho uphelele futhi uzame ukwenza okuthile kuwo. Ngeshwa, awuhlali uphumelela ekugcwaliseni izinhlelo zakho, ngoba "Isingoma" sithanda kakhulu ukusola zonke izinkinga zabayeni bazo. Wena, ngezikhathi ezithile, uhlele izigcawu zabo futhi ungalokothi uvumele ukuthi ushiye igama lokugcina. Umbono wakho kuphela kufanele ulungile. Uma indoda engavumelani nalokhu, uzobe ulungile futhi ungathembekile ekuboniseni ukuthi ayiphutha. I "Isingeniso" ngokwezwi nezwi ine-penchant ye-sophistry egazini labo. Wena ngobuhlakani udidanisa umxhumanisi, unqabe izahlulelo zomuntu futhi unxuse kwabanye, uguqule njalo ukuqondisa kwengxoxo, ngokuvamile, wenza konke ukuze umuntu akhohlwe: owakhulume ngalokho futhi wavumelana nokuphelelwa ithemba. Yiqiniso, ngezinye izikhathi amakhono anjalo akusiza kakhulu ekuphileni. Kodwa emshadweni, izingxoxo ezinjalo, ezenzeka kaningi kakhulu, kancane kancane zibangela ukucasuka emadodeni futhi azimi. Ngakho-ke, zama ukwenza izinto eziyekethisa futhi ukhumbule ukuthi ngokuvamile kwenzeka ukuthi akekho owokusola, kodwa kokubili.
Uma sikhuluma ngezocansi, ke "uLyric" - lo akuyona lona wesifazane ovele ngokushesha, kalula futhi ngokumane avumelane ukusondelana. Lesi simo sengqondo silindele, kuyilapho umuntu ngokwezenzo zakhe embonisa ukuthi uyinkosikazi yakhe, okulungele ukuthi enze konke ngisho nangaphezulu. Kuphela kulokhu, le nkosikazi isacabanga ukuthi umfana uyamfanelekela futhi angathola lokho akufunayo. Uma sikhuluma ngentombazane ethi "Yesenin", isimo sakhe sengqondo ngokuya ocansini sinzima kakhulu. Uthanda ukukhombisa imizwa yakhe, ukunika lo mfana izinkondlo ezinhle zomsebenzi wakhe noma ezinye izinto ezinengqondo. Futhi embhedeni, intombazane enjalo ayikho ngempela ingqondo. Akagxila kulokho okwenzekayo, kodwa uhlale ecabanga ngento ethile engabonakali futhi angabelana ngemicabango yakhe nomlingani wakhe ngesikhathi esifanayo. Yiqiniso, akubona wonke umuntu othokozela ngalokhu. Ngokuphambene nalokho. Ngakho-ke, i- "I-Lyrics" kufanele izame ukuziphatha ngokucophelela kubalingani babo futhi ingabonakali. Ezindabeni zokuzama ukulala kwamabhedi, laba besifazane bayavumelana nemiklamo, kepha njalo bathi bayakwenza lokhu ukufakazela ukuthi akukho okuhle, okukhethekile futhi okuthakazelisayo kulesoveli.
"I-Lyrics" inzima kakhulu ukuyihlukanisa. Futhi ngisho nalapho bengasafuni lobudlelwane. Ukunciphisa abesifazane abanjalo kungukuthi baqala ukucindezela ukuhawukela futhi balalele abafana babo abakudala ukuthi bangabekezeleli. Empeleni, akudingeki wenze lokhu, ngoba ubudlelwane obakhelwe kuphela ngesihawu, wena, cishe, awudingi. Awufuni ukulahlekelwa omunye umvikeli futhi ubuke entsha. Zama ukwamukela, futhi ungaphenduli umfana emehlweni abanye abe yi-despot yangempela kanye ne-monster. Ekujuleni komphefumulo wakho, wena ngokwakho uyazi ukuthi akekho. Kuvele nje ukuthi uphuthele futhi ufuna ukwenza umuntu abe netyala. Ungazivumeli ukuphonsa imicibisholo nokumhleka usulu, ukutshela izimfihlo ezithile ezingamhlazisa. Ungakhohlwa ukuthi uhlangene kahle, futhi uma imizwa ingekho, lesi akusona isizathu sokunqoba impilo yomunye umuntu. Yiba nomusa hhayi kuphela lapho ufuna ukuzuza khona, kodwa futhi ekusebenzelaneni nabanye abantu abakubo noma abathandekayo kuwe.
Bheka ngqo noma yikuphi
Salmon nge-sauce ukhilimu
Indlela yokuhlanza izibhamu ezinwele ze-elite?
Izitayela zezinwele zezinwele ezide eziphakathi
Indoda isabela kanjani ezindabeni ukuthi bayoba nengane
Indlela kaPrincess Diana ekubhujisweni: indaba ezithombeni
Ummbila wesinkwa samaminerandi nama-cranberries namantongomane
Indlela yokukhetha umbala wezinwele ngombala wawo: 3 imithetho esemqoka
Amaconsi ebantwini ekhaleni
I-Horoscope ka-2017 evela kuVasilisa Volodina: Ezempilo, Uthando Nezezimali
Izinzuzo Zokudla Ukudla